U Myint invited Daw Suu to join the economic forum in NPD | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← Maung Maung One – silent protest
dialog in Burma? →
U Myint invited Daw Suu to join the economic forum in NPD
“ဦးသိန်းစိန်နဲ့တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ ကျေနပ်ပါတယ်။ အခု အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကလည်း ဦးမြင့်ဖိတ်လို့ လာခဲ့တာပါ။ ကျေနပ်အားရပါတယ်”ဟု နေပြည်တော်တွင် သတင်းထောက်များကို ပြောကြားလိုက်သည်ဟု 7Day ဂျာနယ်သတင်းတွင် တွေ့ရသည်။
“မနေ့က ခေါင်းမူးနေလို့ နေပြည်တော်ကို သေချာမကြည့်လိုက်ရဘူး။ အခု မပြန်ခင်မှ လိုက်ကြည့်ရမယ်”ဟု ဆိုသည်။
သူတို့ နှစ်ဦး၏ တနာရီကြာဆွေးနွေးပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး “မတူကွဲပြားသော သဘောထားအမြင်များ ဘေးဖယ်ထားပြီး နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူလူထုအတွက် အမှန်တကယ်အကျိုးရှိစေမည့် ဘုံအကျိုးစီးပွားများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အလားအလာများအား ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့သည်” ဟု ဖော်ပြထားသည်။
“နာတာရှည်ရောဂါကို ခဏတာသက်သာရန် သုံးသည့် ဆေးမြီးတိုများသာ ဖြစ်နေမည်” ဟု Yangon Press International သတင်းအုပ်စု၏ သုံးသပ်ချက်ဆောင်းပါးတစောင်တွင် ယနေ့ ရေးသားထားသည်။
“အရပ်သားအစိုးရသစ်၊ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် နှင့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ တစ်စားပွဲတည်းထိုင်ကာ ဆွေးနွေးပွဲများ စတင်နိုင်မည်ဆိုလျှင်တော့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသည် တကယ်ပင် စားပွဲဝိုင်းပေါ် ရောက်လာပြီဟုဆိုနိူင်မည်” ဟု ထိုဆောင်းပါးတွင် ရေးထားသည်။
“စက်မှု(၁)၊ (၂) ၀န်ကြီး ဦးစိုးသိန်း၊ မီးရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်၊ ဦးမြင့်၊ ပါမောက္ခဒေါ်ရီရီမြင့်နဲ့ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်သိန်းဌေးတို့တွေနဲ့ တစ်ဝိုင်းတည်းအတူထိုင်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်သိန်းဌေးတစ်ယောက်ပဲ စစ်ဝတ်စုံနဲ့တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့အားလုံး ရယ်လိုက်မောလိုက်နဲ့ တော်တော်ရင်းရင်းနှီးနှီးစကားပြောကြတာတွေ့ရတယ်။ စကားပြောပြီးဝိုင်းကထမှ တက်ရောက်လာကြတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူ ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ကြတယ်။ ပညာရှင်အချို့လည်း ပါ ပါတယ်။ ဦးဇော်ဇော်တို့ ဦးဝင်းအောင် တို့ကိုလည်း တွေ့ရတယ်”ဟု ဆွေးနွေးပွဲပထမပိုင်းအပြီး ခေတ္တနားချိန်မြင်ကွင်းကို သတင်းထောက်က တယ်လီဖုန်းမှတစ်ဆင့် ပေးပို့ပြောကြားသည်။ (ဓာတ်ပုံနှင့်စာသား 7Day ဂျာနယ်)
ဒေါ်စု နှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်သိန်းဌေး (ဓာတ်ပုံ – getty images)
Posted by oothandar on August 21, 2011 in Burma News Headlines